बिप्लव देखि देउवा सम्म खुलेरै लागे ओली तिर, फेरी यसरी बन्दै छ दुइतिहाईको सरकार ! – Yuwa Aawaj
बिप्लव देखि देउवा सम्म खुलेरै लागे ओली तिर, फेरी यसरी बन्दै छ दुइतिहाईको सरकार !
फागुण २८, २०७७ शुक्रबार 235
काठमान्डौ : सत्तारूढ नेपाल कम्यु’निस्ट पार्टी नेकपालाई एकी’करणपूर्वको अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपालको सम’ग्र राजनीति तरङ्गि’त छ ।’उक्त आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कार’बाही गरी अलग्गै दल कायम गर्ने प्रक्रियामा प्रचण्डसँगै उभिएका
माधवकुमार नेपाल र उनको समूहका नेताहरू नेकपा एमालेमा फर्किएका छन्। प्रतिनिधिसभा पुन:र्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजी’नामा दिनुपर्ने माग उक्त समूहले गरिरहेको थियो । पछिल्लो आदेशले संसद्‌को अङ्क’गणित परिवर्तन गरेसँगै कुन दललाई कस्तो अ’प्ठेरो देखिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसस् पर्ख र हेरुकै अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेस पर्ख र हेरुको रण’नीतिमा बसिरहेको देखिन्छ । यसअघि नेकपा दुई समूहमा वि’भाजित हुँदा उक्त दलले नेकपाको विभाजनले औप’चारिकता पाएपछि मात्रै आफूले भावी सरकारको ने’तृत्व सहितका विषयमा धा’रणा तय गर्ने बताएको थियो।
प्रतिनिधिसभा पुन:र्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनु उपयुक्त हुने धा’रणा उक्त दलले राखेको थियो । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अहिले नै सरकार वा सरकार बाहिरको बहसमा प्रवेश गर्ने समय नभएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
उनले भर्खर नयाँ खेलु सुरु भएको उल्लेख गर्दै हतार गरिहाल्नु जरुरी नरहेको पछिल्लो तीन महिनाको अनुभवले सिकाएको उल्लेख गरेका छन् ।बीबीसीसँग यसअघि कुरा गर्दै काँग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश’शरण महतले कुनै अर्को पक्षलाई सघा’उने गरी आफ्नो दल सरकारमा नजाने बताएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रस् नयाँ स’मीकरण बनाउने प्रयास
नेपाल कम्यु’निस्ट पार्टीको हैसिय’तमा बहुमत र अल्प’मतको आधारबाट अलग्गै पार्टीको है’सियत हुने अवस्था सर्वोच्च अदाल’तको आदेशले समाप्त गरिदिएसँगै त्यसले व्यवहारिक र प्राविधिक ज’टिलता उत्पन्न गराएको नेकपा माओवादी के’न्द्रका नेताहरू बताउँछन्।
नेकपा ने’तृ पम्फा भुसालका अनुसार अदालतको नि’र्णयले संसद्‌को समी’करण फेरिएको छ र मुलुक अल्पमतको सरकारको दिशामा प्रवेश गरेको छ । उनले भनिन्, नेकपाको पूर्ण बहुमतको सरकार थियो तर अब दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मात्रै सरकार बन्न सक्ने स्थिति बनेको छ ।
एक खालको राजनीतिक अ’स्थिरता हुने देखियो तर यसले अझ के के त’रङ्ग पैदा गर्छ त्यो पर्खे’र हेर्नुपर्छ। नयाँ सत्ता समी’करण नबनेकाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फि’र्ता लिने विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे नेकपा माओवादी केन्द्र छलफलमा छ।
भुसाल भन्छिन्, हामीले सम’र्थन फि’र्ता लिँदा सरकार अल्प’मतमा पर्छ तर कसको सरकार बन्ने भन्ने अझै आकार लिएको छैन। त्यसो हुनाले अझै स्थिति तरल छ। हामी पर्खन्छौँ र छलफल गर्दै छौँ। नेता रामबहादुर थापासहित ओली सरकारमा रहेका कतिपय मा’ओवादी नेताहरू वैध ढ’ङ्गले नेकपा एमालेमा बस्न नमिल्ने बताउँदै उनले पदीय हैसि’यत छाडेर नेताहरू माओ’वादीमै फर्कने विश्वास गरिन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालस् उपयुक्त समयमा निर्णय लिने धा’रणा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नयाँ समीक’रण निर्माणमा नेपाली काँग्रेसजस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालको मह’त्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ। आफू अनुकूलको सत्ता गठब’न्धन बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपा नेपालको मात्रै समर्थन भए पुग्छ । ओली इतरको ग’ठबन्धन निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल पार्टी एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ ।
पार्टी विभाजनपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। समय आएपछि कसरी अघि बढ्ने त्यसबारे पार्टीले नि’र्णय लिन्छ ।आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल अगावै चुनाव गराउने सहित सबै विकल्पमा आफ्नो दलमा छलफल हुने महतो बताउँछन्। सत्ता भागब’न्डामा आफूलाई गरिने प्रस्ताव र समय अगावै चु’नाव गराउने विक’ल्प सहितका मु’द्दाले उक्त दलले नेकपा एमाले एक्लैसँग वा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठ’बन्धन गर्ने देखिन्छ।
बिप्लव खनि’ए प्रचण्ड माथि
हालै प्रतिबन्ध फु’कुवा भएको नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले तत्कालीन माओवादी ने’तृत्वले लडाकू शिविर व्यवस्थापनका नाममा अरबौ रुपैयाँ अनि’यमितता गरेको भन्दै त्यसको हिसाबकिताब हुनुपर्ने बताएका छन् ।
विप्लवले तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ने’तृत्वलाई लक्षि’त गर्दै शिविरमा भएको आर्थिक अनि’यमितताबारे ग’म्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रति’बन्ध फुकुवापछि गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले जनमुक्ति सेनाको पैसामाथि भ्रष्टा’चार भएको विषय सार्वजनिक भएको र आफूले त्यतिखेरै पार्टीमा ग’म्भीर रुपमा उठाएको भए पनि बे’वास्ता गरिएको बताएका छन् ।
Prevपार्टीनै फुटाएर एमालेसंग मिल्दै जसपाका यी नेता, यसरी भन्ने भयो ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार !
Nextयी हुन माओवादी ब्युँतिदापनि ओलीतिरै लाग्ने ४ नेता,सांसद पदको मायाँ छैन भन्दै गरे यस्तो घोषण !
हरियो केराउ खानुका अचम्मैको १० फाइदाहरु ।